Maxkamad milliteri oo dil toogasho ah ku riday maxaabiis ku xiran wadanka Masar. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Maxkamad milliteri oo dil toogasho ah ku riday maxaabiis ku xiran wadanka Masar.
On Apr 11, 2018 266 0
Iyadoo qeyb ka ah musalsalka xiriirka ah ee lagu gumaadayo maxaabiista sida cadaalad darrada ah ugu xiran xabsiyada dowladda Afgembiga Masar ayaa maxkamad ku taalla wadankaas waxay riday xukun cusub.
Maxkamadda milliteriga Masaarida ayaa shaaca ka qaaday in 36 kamid ah maxaabiista ku xiran xabsiyada maamulka Siisi lagu xukumey xukun dil toogasho ah, iyadoo lagu eedeynayo arimo aan la ogeyn iney dhab yihiin.
Maxkamadda oo xukunkeeda soo saartay ayaa raggan waxay ku eedeysay iney abaabuleen qaraxyo lagu qaadayo kaniisado ku yaala wadanka Masar sanadkii 2016-ka, iyo dilal toogasho ah oo loo geystay ciidamo katirsan ammaanka.
Waxa loogu yeero muftiga guud ee dalka Masar ayaa loo gudbiyay warqadda xukunka toogashada ee raggan, waxaana la sugayaa inuu qalinka ku duugo.
Xabsiyada maamulka Siisi waxaa ku xiran kumanaan ruux oo xitaa dumar iyo caruur da’ yar ay ku jiraan, waana nidaam maquuniya dadka shacabka ah ee xitaa fakar ahaan kasoo horjeeda, iskaba daaye qofka aaminsan fakar Jihaad iyo xaakimiyada Shareecada Islaamka.